EX - ABSDF: အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေကဏ္ဍများ မိတ်ဆက်
Ye Min Tun December 26, 2013 at 2:04pm
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက နိုင်ငံရေးသမားတွေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီရံပုံငွေ ဘယ်ကရှာသလဲ ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပြီး ဘယ်လိုစနစ်တွေနှင့် ဘယ်သူတွေက စီစစ်သလဲ။ ဘယ်လိုဥပဒေတွေရှိပြီး ဘယ်လိုထိန်းချုပ် ကန့်သတ်ထားပုံကို ကျနော် စာတွေ့နှင့်အတူ ခြောက်လကြာ ကျနော်ပါဝင်ကူညီခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု အတွေ့ကြုံများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး တင်ပြပါမယ်။ ကျနော့်တင်ပြမှုက အလုံးစုံပြည့်စုံမည်ဟု မယူဆသော်လည်း အဓိက အခြေခံအကြောင်းရာများ နှင့် အချက်လက်များ အတွက် စိတ်ချနိုင်ပြီး။ အဝေးက လေ့လာလိုသူများ အထောက်ကူပြုစေရန် မျော်လင့်ပါတယ်။ အမေရိကန်စနစ်ဖြင့် အလှမ်းဝေးသူများပါ ရှင်းလင်းသိရှိရန် ကြိုးစားရတာ ဖြစ်လို့ အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီး တင်ပြပေးသွားပါမယ်။
ယ္ခုပထမပိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေခံနှင့် ပြည်ထောင်စုရံပုံငွေကို တင်ပြမှာ ဖြစ်ပြီး။
ဒုတိယပိုင်းမှာ Political Action Committee (PAC) ပါဝင်ပတ်သက်မှုများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး။
တတိယပိုင်းမှာ အသင်းအဖွဲကြီးများနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၏ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တင်ပြခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သိလိုသူများအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် စနစ်တခုတွင် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးများကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိပြီးမှာ ကောင်းတာအတုယူပြီး မကောင်းသည်ကို ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီး။ လူငယ်များ စနစ်တခုကို လေ့လာဝေဖန်နိုင်ရန် ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။
အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီအဆင့် နှင့် ပါတီအဆင့်မဟုတ်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုပြီးတော့ အခြေခံနှစ်မျိုးရှိကာ။ ပါတီအဆင့် (Partisan) အား သမ္မတ၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အထက် အောက် လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အမတ်များ စသည်တို့ကို ပါတီအလိုက် ယှဉ်ပြိုင်ကာရွေးချယ်ပြီး။ အချို့မြို့ကြီးများတွင် မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပါ ပါတီအလိုက်ရွေးချယ်သည်။
ပါတီအဆင့်မဟုတ်သည့်(Non-partisan) အား မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ဗဟိုတရားသူကြီးများကို ရွေးချယ်သည်။ မြို့တော်အဆင့်မှာ ပါတီအဆင့် မဟုတ်သော်လည်း အင်အားကြီး ပါတီနှစ်ခုက ဆင်းလာသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် အခြားပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ယှဉ်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး။ အရပ်စကားဖြင့် write in ဟုခေါ်သည့် တသီးပုဂ္ဂလ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများလည်း ရှိသည်။
(FEC logo by Google image)
မြိုတော်အဆင့်ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးရုံးမှ ကိုင်တွယ်ပြီး။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို The Federal Election Commission (FEC) မှကိုင်တွယ်ပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်သည် ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Theodore Roosevelt (၁၉၀၁-၁၉၀၉ ခုနှစ်)မှ ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေလိုအပ်ချက်ကို သိမြင်လာရာမှ စတင်ခဲ့ပြီး။ ၁၉၀၇ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ကွန်ဂရတ်တွင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရေးဆွဲကြရာ။ ၁၉၀၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၆ ခုနှစ်အထိ the Presidential Election Campaign Fund Act အဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။ လိုအပ်ချက်အတိုင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ခဲ့သည့် အနက် ထင်ရှားသည့် ပြင်ဆင်မှုများမှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် the Federal Election Campaign Act အဖြစ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် the Federal Election Campaign Laws အဖြစ်ထပ်မံ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
ရံပုံငွေကိစ္စများတွင် အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး အုပ်စုများ အကြောင်းကို သိထားဖို့ လိုပါသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများသည် မိမိတို့ရည်မှန်းချက်များ အစိုးရပေါ်လစီတွင် ပေါက်ရောက်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီများ ဖြစ်သော PACs (Political Action Committee) များဖွဲ့စည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ PAC များသည် မိမိတို့ ရံပုံငွေဖြင့် မိမိတို့လျာထားသော အမတ်လောင်းများ၏ မဲဆွယ် စည်းရုံရေး နှင့် မိခင်အဖွဲ့စည်း၏ ပေါ်လစီများကို အထက်လွှတ်တော် အောက်လွှတ်တော်တွင် မဲများရရှိပြီး ပြဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် ကြိုးစားကြသည်။ ထိုသို့ကြိုးစားရာတွင် မိခင်အဖွဲ့စည်းက ကြီးမားလျှင် ကြီးမားသလောက် ရံပုံငွေ များပြားရာ မိမိနှစ်သက်ရာ နိုင်ငံရေးသမားများကို ပေါက်ရောက်အောင် တင်ပေးနိုင်သည့် အထိ အင်အားကြီးမားသလို PAC အခန်းဂဏ္ဍသည် အမေရိကန်နိုင်ငံရေးတွင် အရေးပါလှသည်။ နိုင်ငံရေးသမား၏ နောက်ခံ PAC ကိုကြည့်ပြီး သူ့၏ အနာဂတ်ကို မှန်းဆနိုင်သည်အထိ သြဇာကြီးမားပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အင်ဒီယန်းနားပြည်နယ် တခုထဲမှာ PAC အသုံးပြုသွားတဲ့ ငွေကြေး ပမာဏမှာ
AT&T (telecommunications), $ 471,102
Centaur (gaming and house-racing), $ 439,392
Indiana Trial Lawyers Association, $ 407,751
Duke Energy (energy utility), $ 331,579
Eli Lilly and Co. (pharmaceuticals), $ 310, 879
ယ္ခုပမာဏအရ ပါတီနှင့် နိုင်ငံရေးသမား ရံပုံငွေ ရရှိပုံကို မှန်းဆသိနိုင်သည်။ အသေးစိတ် ဥပဒေကန့်သတ်ချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပမာဏရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အဆင့်တွင် အင်အားကြီးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ရံပုံငွေ ကိုးသိန်းကိုးသောင်း (၉၉၀၀၀၀) အထိ ရရှိနိုင်ပြီး။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်လာ တသန်းတသိန်း နှစ်သောင်းငါးထောင် (၁၁၂၅၀၀၀) အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုငွေပမာဏမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေမြှင့်တင်ရေးပွဲမှ ရရှိသည့် ရံပုံငွေပမာဏ၏ ၇၅% ကို ပြည်နယ်အစိုးရက မြှင့်တင်ထောက်ပံ့တာဖြစ်သည်။ ( မှတ်ချက် ပြည်နယ်အလိုက် ပမာဏ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပြီး၊ ယ္ခုပမာဏမှာ မီချီဂန်ပြည်နယ် ဖြစ်ပါသည်။) ထို့ကြောင့် အများပြည်သူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကောက်ခံခွင့်ရှိသည့် ပမာဏမှာလည်း သတ်မှတ်ချက် ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် သတ်မှတ်ချက် ဇယားကွက်တွင်ကြည့်ပါ။
(The FEC image)
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပမာဏရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အဆင့်တွင် အင်အားကြီးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ရံပုံငွေ ကိုးသိန်းကိုးသောင်း (၉၉၀၀၀၀) အထိ ရရှိနိုင်ပြီး။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်လာ ဆယ့်တသိန်း နှစ်သောင်းငါးထောင် (၁၁၂၅၀၀၀) အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုငွေပမာဏမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ရံပုံငွေမြှင့်တင်ရေးပွဲမှ ရရှိသည့် ရံပုံငွေပမာဏ၏ ၇၅% ကို ပြည်နယ်အစိုးရက မြှင့်တင်ထောက်ပံ့တာဖြစ်သည်။ ( မှတ်ချက် ပြည်နယ်အလိုက် ပမာဏ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပြီး၊ ယ္ခုပမာဏမှာ မီချီဂန်ပြည်နယ် ဖြစ်ပါသည်။) ထို့ကြောင့် အများပြည်သူနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကောက်ခံခွင့်ရှိသည့် ပမာဏမှာလည်း သတ်မှတ်ချက် ရှိပါသည်။
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် လျာထားခြင်းခံရသည့် Major ပါတီတခုလျှင် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အခြေခံ ရံပုံငွေ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး။ Minor ပါတီနှင့် ပါတီအသစ်များလည်း ညီတူမျှတူဖြစ်ပြီး။ တသီးပုဂ္ဂလ အတွက်တော့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖြင့် စတင်ပါသည်။ အစိုးရပေးတဲ့ ရံပုံငွေက ရွေးကောက်ပွဲတခု အောင်နိုင်ဖို့ PAC များပံ့ပိုးသည့် ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော် နည်းပါးသော်ငြားလည်း FEC ပြန်တမ်းအရ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အထွထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်လာ ၉၄ သန်း နှင့် အကြိုရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄၅.၆ သန်း။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ဒေါ်လာ ၈၄.၁ သန်းနှင့် အကြိုအတွက် ဒေါ်လာ ၄၂.၅ သန်း ကုန်ကျခံခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် ထိုရံပုံငွေများကို အမေရိကန်ပြည်သူများ ပေးဆောင်သည့် နှစ်စဉ်အခွန် ရှင်းတမ်း လျှောက်လွှာပုံစံ (Form 1040 Department of the Treasury) တွင် “ သင်၏ အခွန်ငွေထဲမှ ၃ ဒေါ်လာကို the Presidential Election Campaign Fund အဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ပြုပါသလား” Yes or No မေးခွန်းတခု ပါဝင်ပြီး။ နှစ်စဉ် လျှောက်လွှာရှင် ပျမ်းမျှ ၃၃ သန်းကျော် သဘောတူ လက်ခံကြပါသည်။ ထိုရံပုံငွေများကို FEC မှ ထိန်းသိမ်းထားကာ လေးနှစ် တကြိမ်အသုံးပြုပြီး ကျန်ငွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားသည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး။ အခွန်ထမ်းပြည်သူ တယောက်အနေဖြင့် ထိုအသုံးစရိတ်နှင့် ကိုယ်စလှယ်လောင်း တဦးချင်းစီ၏ အသုံးစရိတ် ရှင်းတမ်းများကို ပြည်ထောင်စု နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စာမျက်နှာများတွင် အချိန်မရွေး ဖတ်ရူ့နိုင်ပြီး။ မိတ္တူတောင်းခံခွင့်ရှိပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ အသုံးစရိတ်နှင့် လက်ခံရရှိသည့် အလှူငွေများကို အစိုးရနှင့် အများပြည်သူထံ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်အတွင်း တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး။ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့် သုံးဆွဲမှုများ ရှိခဲ့သော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ FEC ရံပုံငွေကို ပြန်လည်တောင်းခံ မည့်အပြင် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရမှာဖြစ်သည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အတွက် အမေရိကန်မီဒီယာများကလဲ စတ္တုထမဏ္ဍိုင်ပီပီ စောင့်ကြည့်ကာ အသုံးစရိတ် တင်ပြမှုနှင့် ပြင်ပအခြေနေ ကွာဟမှုများ တွေ့သည့်နှင့် ချက်ချင်းထိုးနှက်မှုများကို လုပ်ကြလေ့ရှိသည်။ ဤသည်မှာ အစိုးရအသုံးရ ရံပုံငွေနဲ့ သိသင့်စရာ အခြေခံအချက်လက်များဖြစ်ပြီး။ အများပြည်သူနှင့် PAC မှ ပံ့ပိုးသည့် ရံပုံငွေနှင့် ရံပုံငွေရှာဖွေပုံများကို ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည်။
Bowman and Kearney. State and Local Government: the Essentials. Print. 2012.
Federal Election Commission. the Presidential Election Campaign Fund. NW, Washington. Web. 2013.
Hanley, Jr. and Rozycki. Politics and Government in Michigan: Sixth edition 2012. Learning Solution. Charles Stewart Mott Community College. Print. 2012.